May 12, 2022 - Online Hartha
ဂျပန်ကြီးတစ်ယောက် ပြောပြတဲ့ မာနကြီးလှတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ အကြောင်း
May 12, 2022 by Online Hartha
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ ဂျပန်တစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်.။မင်းတို့မြန်မာတွေက သိပ်မာနကြီးတယ် ပြောပါတယ်.။ မေး။ ။ ဘယ်မှာမာနကြီးလို့လဲ? ဖြေ။ ။မြန်မာပြည်မှာ လူတစ်ယောက်က အမှားလုပ်လိုက်တယ်ဒါကို ထောက်ပြကြည့် အဲဒီလူက သူ့အမှားတစ်ခုအတွက် အကြောင်းပြချက် ၁၀ခုလောက်ကို မနားတန်းပြောပြလိမ့်မယ်.။ ဒါပေမဲ့ မတောင်းပန်ဘူး,မဝန်ခံဘူးသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို အကျမခံဘူးဒါက မာနကြီးတာပေါ့.။ အလုပ်သမားက အမှားလုပ်လိုက်မယ်..ဆူလိုက်ကြည့် နောက်နေ့အလုပ်မလာတော့ဘူး,..အလုပ်သစ်သွားရှာမယ်,အလုပ်လေးတစ်ခုအတွက်လောက် သိက္ခာအကျခံပြီ မတောင်းပန်ဘူး,..အဲဒါ မာနကြီးတာပေါ့.။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးက ကားလမ်းတွေ ပိတ်နေတယ်,ကားတွေမောင်းလို့ မရဘူး,တကယ်တန်းကြည့်ကြည့်ပါ,ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ကားအရေ အတွက်နဲ့ လမ်အနေအထားအရ ကားလမ်းက ဆိုးဝါးစွာ မပိတ်သင့်သေးပါဘူး။ သို့သော် လမ်းတွေက ပိတ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ,ရှင်းရှင်းလေး ပြောရရင်မြန်မာပြည်က ယာဉ်မောင်းတွေက တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန် ဦးစားပေးဖို့ မစဉ်းစားကြဘူး,။ တဖက်သားကို ဦးစားပေးလိုက်တာနဲ့ အလျော့ပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်က သိက္ခာကျသွားမယ်လို့ယူဆကြလို့လားမပြောတက်ဘူး,။ ပိတ်ပြီမောင်းရတာနဲ့ တဖက်သားက … Read more
သံပုရာပင် အပွင့်တွေပွင့်ပေမယ့် အသီးမတင်ရင် ဒါတွေလုပ်ပေးပါ
သံပုရာပင် အပွင့်တွေပွင့်ပေမယ့် အသီးမတင်ရင် ဒါတွေလုပ်ပေးပါ သံပုရာပင်တွေ အသီးတင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲ သံပုရာပင်စိုက်တဲ့ ဦးကြီးတချို့ စိုက်ထားတာ (၃-၄) နှစ်ရှိပြီ အပွင့်တွေလည်း ပွင့်တဲ့အခါပွင့်ပေမယ့် အသီးမတင်ဘူး ကြုံတွေ့နေပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ကအချက်တွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီဗျ။ ၁။ နေရောင်ခြည် သံပုရာပင်က အသီးတွေ မသီးခင်အချိန်မှာ နေရောင်ခြည်ကောင်းကောင်းရဖို့လိုပါတယ်ဗျ။ နေရောင်ကောင်းစွာမရရင်တော့ ပန်းလည်းများများစားစားပွင့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းမပွင့်ရင်တော့ အသီးလဲ မတင်တော့ပါဘူး။ သံပုရာပင်က တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံး (၆)နာရီလောက် နေရောင်ရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဦးကြီးတို့ရဲ့ သံပုရာပင်တွေက အရိပ်အောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အရိပ်​​ဖြစ်စေတဲ့အပင်တွေကို ကိုင်းချိုင်တာမျိုးလုပ်ပြီး အလင်းရရှိအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ၂။ ရေ အသီးတင်ဖို့ ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ရေရရှိမှုပါ။ ရေကို လုံလုံလောက်လောက် ပေးသွင်းခြင်းက သံပုရာသီးတွေ … Read more
ပဲပင်ပေါက် စားသူတိုင်းသိဖို့ မျှဝေပေးပါ (အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်ပါတယ်)
ပဲပင်ပေါက် စားသူတိုင်းသိ ဖို့ မျှဝေပေးပါ.. (အမြစ်လည်းတို အသက်လည်းတို) မိ တ်ဆွေတစ်ယောက်က ပဲပင်ပေါက်လုပ်ငန်း လုပ်ဖို့အကြံတောင်းတဲ့အခါ လုပ်နည်းစနစ်လေးတွေ ပြောပြဖြစ်တယ်ပေါ့။ နောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ သူကဖုန်းဆက်တယ် ” ကိုကြမ်းရေ ” ပဲပင်ပေါက်လုပ်တဲ့နည်းမှာ ဆေးသုံးကြတယ်ဗျ။ အဲ့ဒိဆေးသုံးရင် ပဲပင်ပေါက်အမြစ်တွေ မပါသလောက်ကို တိုတယ် အဲ့ဆေးအမည်သိလား”ကိုကြမ်း” ဟာ ငါသိတဲ့နည်းက ပေါက်လာတဲ့ အပင်တွေကို အမြစ်ကနေဓားနဲ့ဖြတ် ရောင်းတာပဲသိတာ အမြစ်တိုဆေးသုံးတာ မသိသလို အဲ့ဆေးအမည်လည်း မသိဘူးဟ စုံစမ်းကြည့်အုံးမယ်။ ငါပြန်ပြောမယ် ခဏတော့စောင့် ။ အဲ့ဒိအဖြေပေးပြီး မှတ်ဉာဏ်ထဲ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ပဲပင်ပေါက် လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို လိုက်စုံစမ်းတော့ အဖြေက * ဟုတ်တယ်ဗျ ကိုလူကြမ်းရ အမြစ်တိုဆေး သုံးကြတယ်။ ဒါတင်မကဘူးဗျ အချို့တွေက ချွတ်ဆေးတွေပါ သုံးကြသေးတယ်။** … Read more
ကလေးကို မူကြိုထားပြီဆိုရင် (ကလေးမိဘများ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ထားပါ)
ကလေးကို မူကြိုထားပြီဆိုရင် (ကလေးမိဘများ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ထားပါ) ညအိပ်ချိန်မှန်ပါစေ…ဒါမှမနက်နိုးချိန်ပုံမှန်ဖြစ်မှာပါ နေ့ခင်းအိပ်ချိန်မှာလည်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပါလိမ့်မယ် မနက်စာကိုအာဟာရဖြစ်အောင်ကျွေးပါ မနက်စာသေချာမစားလာတဲကလေးဟာ Activities တွေမှာ စိတ်မဝင်စားနိုင်ပါဘူး ကျောင်းမှန်မှန်ပို့ပေးပါ…နေ့စဉ်ကျောင်းပို့မှသာ ကျောင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာပုံမှန်ပါဝင်ခွင့်ရပြီး ကျောင်းပျော်လာမှာပါ တစ်လမှာ လတစ်ဝက်လောက်သာကျောင်းတက်တဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ် ကလေးကမသွားချင်ရင်မပို့ပါဘူးတဲ့ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မူကြိုထားပါသလဲ??? မဖြစ်သင့်ပါ မူကြိုမှာလည်းသူ့စည်းကမ်းနဲ့သူမို့ လေးစားသင့်ပါတယ်…။ ကလေးကိုဖုန်းပေးသုံးရင် အချိန်သတ်မှတ်ပေးပါ လုံးဝမသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ မူကြိုအရွယ်ကို ည ၁၂ ထိ game ပေးဆော့တဲ့အမေမျိုးတွေ့ဖူးပါတယ် ကလေးဟာ လက်ကိုတစ်ချိန်လုံးဖုံးပွတ်သလိုလုပ်နေပြီး မကြာခဏမျက်ရည်ပူကျပါတယ် attention လုံးဝမရပါ စာအုပ်နဲ့အစားထိုးနိုင်ပါတယ် ကလေးနဲ့အတူနေတဲ့လူကြီးဟာ တီဗီအတူကြည့်မယ်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ကလေးဟာသင်ယူနေတာမို့သတိထားသင့်ပါတယ် ပိုကောင်းတာက စာအုပ်အတူဖတ်တာ ပုံပြောပြတာ အတူကစားတာ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ကလေးကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မဆက်ဆံပါနဲ့ ကလေးဟာ တခြားသူကိုလည်း ဒီအတိုင်းပြန်ဆက်ဆံပါတယ် ကျမမူကြိုမှာ ကလေးတစ်ယောက် … Read more
သံပုရာ၂ခွက်တင် ငွေအရမ်းဝင် ဆိုတဲ့အတိုင်း
သံပုရာ၂ခွက်တင် ငွေအရမ်းဝင် ဆိုတဲ့အတိုင်းယတြာလုပ်နည်း သံပုရာ၂ခွက်တင်ငွေအရမ်းဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းယတြာလုပ်နည်း၁၁ရက်နေ့အတွက်ယတြာကုသိုလ်ပြုပါတယ် မနက်ဖြန်ကနေ ၂ပတ်အတွင်းငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေ ကံတက်ချင်တဲ့သူတွေ လာဘ်ပွင့်ချင်သူတွေ ထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေ ဒီယတြာကိုရှဲပြီးလုပ်ပါ မနက်ဖြန်မနက်၆:၀၀ကနေ၉:၀၀ အတွင်းပြုလုပ်ရန်ယတြာသံပုရာ၂ခွက်ကိုဖျော်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကပ်လှုပါ ဖယောင်းတိုင်၂တိုင်ပါ မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပေးပါ ဆုတောင်းရမှာပါယနေ့မှစပြီး ငွေဝင်ရပါလိုပါတယ် အရောင်းအဝယ်ကောင်းရလိုပါတယ်ထီပေါက်စေလိုတယ်ဟုအရှင် ဘုရားဟုဆုတောင်းပါ မနက်ဖြန်တစ်ရက်ပဲလုပ်ရမှာပါရှဲပြီးမှယတြာကိုလုပ်ပါနှစ်ပတ်အတွင်းသိသိသာသာငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ် ကံတွေတက်ပြီးအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေရလာပါလိမ့်မယ်ရှဲပြီးမှယတြာလုပ်ပါ ၇ရက်သားသမီးတွေဒီယတြာကိုတွေ့တော့လိုက်လုပ်ကျတော့မိမိလဲကုသိုလ်ရပါတယ်ငွေလဲပိုဝင်ပါတယ် ဆရာတစ်နေ့တစ်ခါတစ်ပတ်တစ်ခါတင်ပေးတဲ့ ယတြာကိုရှဲပြီး လိုက်လုပ်ကျတဲ့သူတွေအားလုံးနှစ်ပတ်အတွင်းငွေဝင်ထီပေါက်စီးပွားတက် ကြပါစေလို့ဆရာကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…။ Ctrdit to ဆရာထူးမြတ်အောင် Unicode Version သံပုရာ၂ခှကျတငျ ငှအေရမျးဝငျ ဆိုတဲ့အတိုငျးယတွာလုပျနညျး သံပုရာ၂ခှကျတငျငှအေရမျးဝငျဆိုတဲ့အတိုငျးယတွာလုပျနညျး၁၁ရကျနအေ့တှကျယတွာကုသိုလျပွုပါတယျ မနကျဖွနျကနေ ၂ပတျအတှငျးငှဝေငျခငျြတဲ့သူတှေ အရောငျးအဝယျကောငျးခငျြတဲ့သူတှေ ကံတကျခငျြတဲ့သူတှေ လာဘျပှငျ့ခငျြသူတှေ ထီခြဲပေါကျခငျြတဲ့သူတှေ ဒီယတွာကိုရှဲပွီးလုပျပါ မနကျဖွနျမနကျ၆:ဝဝကနေ၉:၀၀ အတှငျးပွုလုပျရနျယတွာသံပုရာ၂ခှကျကိုဖြျောပွီးမွတျစှာဘုရားကိုကပျလှုပါ ဖယောငျးတိုငျ၂တိုငျပါ မွတျစှာဘုရားကိုပူဇျောပေးပါ ဆုတောငျးရမှာပါယနမှေ့စပွီး ငှဝေငျရပါလိုပါတယျ အရောငျးအဝယျကောငျးရလိုပါတယျထီပေါကျစလေိုတယျဟုအရှငျ ဘုရားဟုဆုတောငျးပါ မနကျဖွနျတဈရကျပဲလုပျရမှာပါရှဲပွီးမှယတွာကိုလုပျပါနှဈပတျအတှငျးသိသိသာသာငှဝေငျလာပါလိမျ့မယျ ကံတှတေကျပွီးအောငျမွငျမှုတိုးတကျမှုတှရေလာပါလိမျ့မယျရှဲပွီးမှယတွာလုပျပါ ရရကျသားသမီးတှဒေီယတွာကိုတှတေ့ော့လိုကျလုပျကတြော့မိမိလဲကုသိုလျရပါတယျငှလေဲပိုဝငျပါတယျ ဆရာတဈနတေ့ဈခါတဈပတျတဈခါတငျပေးတဲ့ ယတွာကိုရှဲပွီး … Read more
ခေတ်စားနေတဲ့ ‌အော်ဂဲနစ် သဘာဝမြေသြဇာ အလွယ်ပြုလုပ်နည်း
ခေတ်စားနေတဲ့ ‌အော်ဂဲနစ် သဘာဝ မြေသြဇာအလွယ် ပြုလုပ်နည်း အကျိုးအာနိသင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် သစ်သမီးများ ကောင်းမွန်သော အရသာ ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားစေခြင်း ၊ ပင်စည် အကိုင်းအခတ် အရွက် စသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးပွားမူ့မြန်စေခြင်း ၊ ရောဂါပိုးတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ကိုလည်း ခုခံကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ မြေကြီးအစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိသဖြင့် ရေငတ်သည့်ဒဏ်၊ မိုးခေါင်းသည့်ဒဏ်၊ နေလောင်သည့်ဒဏ် စသည့် ရာသီဥတုဆိုကျိုးဒဏ်တို့ကိုလည်း ခုခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်း။ သဘာဝမြေသြဇာကို နေရောင်တိုက်ရိုက်မကျသော သစ်ပင်၊ ဝါးပင်အောက်များ၌ ပြုလုပ်သင့်သည်။ မိုးရာသီတွင် အမိုးမိုးပေးရန်လိုသည်။ ရေမဝင်စေရန် ကုန်းအမြင့်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်သင့်သည်။ ကြက်ချေး ၂ တင်းသစ်ပင်ကြီးအောက် မြေ ၃ တင်းဖွဲနု ၁ တင်းထင်းပြာ ၁ တင်းစပါးခွံ ပြာ ၁ တင်းသကြားညှိကျိုရည် ၁ လီတာကုန်ကျမ်းများကို … Read more
သိန်း ၁၀၀ တန် မြေကွက်ကို ရောင်း၊ တဝက်ကို ဘဏ်ထဲထည့် တဝက်ကို ရင်းနှီးပြီး ၅ နှစ်ကြာသောအခါ
သိန်း ၁၀၀ တန် မြေကွက်ကို ရောင်း၊ တဝက်ကို ဘဏ်ထဲထည့် တဝက်ကို ရင်းနှီးပြီး ၅ နှစ်ကြာသောအခါ(စာလေးကို ဆုံးအောင် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်) လူတစ်ယောက်.. သိန်း ၁၀၀ တန် မြေကွက်ကို ရောင်းပြီး တစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့ သိန်းငါးဆယ်ကို ဘဏ်ထဲထည့်လိုက်တယ်၊ တစ်ဝက်ကို နိုင်ငံခြားမှာ သွားအလုပ်လုပ်ဖို့ အတွက်ရင်းနှီးလိုက်တယ်…။ သူနိုင်ငံခြားမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း၊ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ၅နှစ်သွားအလုပ်လုပ်တယ်၊ အမိမြေပြန်လာတော့ သိန်း ၅၀၀ ပြန်ပါလာတယ်၊ ဒါဆို သူရင်းနှီးထားတဲ့ငွေသိန်း ၅ဝ ထက် ဆယ်ဆပိုမြတ်သွားပြီပေါ့…။ ဒါပေမယ့် ငါးနှစ်ကြာပြီးနောက် သူသိန်း၁၀၀နဲ့ ရောင်းခဲ့တဲ့မြေကွက်က အခု ခေါ်ဈေး သိန်း ၃၀၀၀ ဖြစ်နေပြီ။ ဒါဆို သူရှုံးခဲ့တာ ၁။ ငွေသိန်း ၂ထောင့်၉ရာ ၂။ သူပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ … Read more